FAQ -6- Learn to Speak English Online
​မေး....Consider , Contemplate ကွာခြားပုံသိပါရစေ ဆရာ။
ဖြေ....Consider - ဆိုတာက တစ်ခုခုကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချလုပ်ကိုင်ဖို့...စဉ်းစား ဆင်ချင်တာ( စဉ်းစားချင့်ချိန်ပြီးရင်...ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ် )Contemplate - ချင့်ချိန်စဉ်းစားတာ။ ချိန်ဆတာ။He contemplated his life. => He thought about his lifeNegative မဟုတ်ပေမဲ့..Negative သဘောနည်းနည်းဆန်တဲ့အရာကိုရည်ညွှန်းတယ်။He considered his life. => He thought about all the aspects of his life.( Positive သဘောဆန်တဲ့အရာကိုဆိုလိုတယ် )He considered his lifeasuccess. => He thought his life wasasuccess.( ဒီလိုစာကြောင်းမျိုးမှာ....contemplate ကိုမသုံးသင့်တော့ဘူး )။ဒီနှစ်ခုကို နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆို..........Contemplate က ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ အဆင်သင့်မဖြစ်နိုင်ပဲ..ချီတုံချတုံ စဉ်းစားနေရတာ။Consider က ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ ကြိုးစားပြီး သုံးသပ်ဆင်ခြင်တာ။
မေး……On my way ဆိုတဲ့အသုံးခနခဏတွေ့ရတယ်ဆရာ ဘယ်လိုအသုံးပြုတာလဲဘာအဓိပ္ပါယ်လဲ ရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ် ဆရာ။
​ဖြေ….On ( one’s ) way – coming, going, leaving ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဥပမာWhere are you going? ( ဘယ်သွားမလို့လဲ )I am on my way to work. ( အလုပ်သွားတော့မလို့ )…ဒီနေရာမှာI am going to work. နဲ့လည်း အဓိပ္ပါယ်အတူတူဖြစ်ပါတယ်။Where is she going? ( သူမဘယ်သွားမလို့လဲ )She is on her way to school. ( သူမကျောင်းသွားတော့မလို့ )She is going to school. နဲ့ အတူတူဖြစ်ပါတယ်။တစ်ယောက်ယောက်ကနေ ကိုယ့်ကို ဖုန်းခေါ်တယ်ဆိုပါစို့။I would like to see you in my office foramoment please.( မင်းကို ငါ့ရုံးခန်းမှာ လောလောဆယ်တွေ့ချင်ပါတယ် )On my way. ( ကျနော်ထွက်လာပါပြီ )…I am leaving နဲ့အတူတူဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခု…..When does she come here? ( သူမဘယ်အချိန်လာမှာလဲ )She is on her way. ( သူမလာနေပါပြီ )..She is coming နဲ့အတူတူဖြစ်ပါတယ်။
​မေး......Why not. ကို ဘယ်လို့ နေရာမျိုးမှာ သုံးရမလဲ ဆရာ ။
​ဖြေ......အကြောင်းပြချက်အတွက် မေးခွန်းပြန်မေးတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်။ ဥပမာI will go to Thailand next month. ( ရှေ့လ ထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားမယ် )Why? ( ဘာလို့သွားမှာလဲ ).......ဒါက သာမာန်ရိုးရိုးစာကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။I won't go to Thailand next month.( ရှေ့လထိုင်းကို မသွားတော့ဘူး )Why not? ( ဘာလို့မသွားတာလဲ ).....အငြင်းဝါကျဖြစ်တဲ့အတွက် Why ကိုnot နဲ့ ပေါင်းစပ်မေးရပါတယ်။
​မေး..............For rent နဲ့ For lease ဘာကွာပါသလဲ ဆရာ
​ဖြေ..........နှစ်ခုလုံးက ငှားတယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။Rent ဆိုတာက ရေတို ငှားရမ်းတာဖြစ်ပြီး ၊ Lease ဆိုတာက ရေရှည်ငှားရမ်းတာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ..အိမ်တွေကို တစ်လခြင်းဆီငှားတာဆိုရင်...rent လို့သုံးပါတယ်။အနည်းဆုံး ခြောက်လလောက်နဲ့အထက် လစာအကုန်ပေးငှားရတာမျိုးကို lease လို့ခေါ်ပါတယ်။
​At the moment နဲ့ For the moment ကွာခြားချက်
​At the moment - ယခုဖြစ်နေစဲ မှာသုံးပါတယ်။I am studying chemistry at the moment ...( အခု ဓါတုဗေဒဘာသာရပ်ကိုကျက်နေပါတယ်..)For the moment - တစ်ခုခုကိုစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်လောလောဆယ်တည်ရှိနေတာကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုပါတယ်။ ဥပမာI am living with friends for the moment.( လောလောဆယ်ခနတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့နေနေပါတယ် )....သဘောကမိမိကိုယ်ပိုင် နေရာတစ်ခုမရသေးခင်...သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ခနနေတဲ့သဘော..မိမိကိုယ်ပိုင်နေရာတစ်ခုအတွက် စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်မှာ ဖြစ်ပျက်တဲ့သဘော။at the moment က မျက်စိရှေ့ လောလောဆယ်ဖြစ်ပျက်နေတာကိုပဲရည်ညွှန်းတယ်။for the moment က အနာဂါတ်တစ်စုံတစ်ခုအတွက် လောလောဆယ်ဖြစ်ပျက်နေတာကို ရည်ညွှန်းတယ်။ နောက်ထပ် ဥပမာများကို ဆက်ကြည့်ပါ။မြန်မာလို အနီးစပ်ဆုံး ဘာသာပြန်ကြည့်ရရင်....at the moment ကို ( ယခု၊ အခု )လို့ဘာသာပြန်ကြည့်မယ်။ for the moment ကို ( လောလောဆယ် ) လို့ဘာသာပြန်ကြည့်မယ်.....။ အခု ၊ ယခု ဆိုတော့.....ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အချိန်ကိုပဲ ရည်ညွန်းတယ်.......What are you doing? ( ခင်ဗျာ ဘာလုပ်နေလဲ )I am watching the TV at the moment. ( ကျနော် အခု တီဗွီကြည့်နေတယ် ).....ဆိုလိုတာက ကျနော် အခု တီဗွီကိုပဲကြည့်နေတယ်...တခြားဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘော။I am watching the TV for the moment. ( လောလောဆယ်တော့ တီဗွီကြည့်နေတယ်)အခုတော့ တီဗွီကြည့်နေတာပဲ...တစ်အောင့်နေ သူငယ်ချင်းတွေကလာခေါ်ရင်..ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုပေါ့ ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။
​မေး....ဆရာရှင့် by the time နဲ့ at the moment ဘယ်လိုကွာခြားပါသလဲ ဘယ်လိုမျိုးသုးံစွဲလို့ရနိုင်မယ်ဆိုတာကို ဥပမာ လေးနဲ့ပြောပေးလို့ရနိုင်မလား
​ဖြေ....By နဲ့အချိန်ကာလတွဲတဲ့အခါ...( ဆိုရင် ) ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်..ဥပမာ...by tomorrow - မနက်ဖြန်ဆိုရင်၊ by next week - ရှေ့အပတ်ဆိုရင်၊by the time - အဲဒီ့အချိန်ဆိုရင်၊အဲဒီ့အချိန်မှာ.......အသုံးပုံစံကိုကြည့်ပါ.............By the time he comes, we will have already left.( သူလာတဲ့အချိန်ဆိုရင် ( အချိန်မှာ ) ကျနော်တို့ကထွက်သွားပြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်) At the moment ( Idiom ) - လောလောဆယ်၊ အခုWe are reading at the moment. ( ကျနော်တို့လောလောဆယ်မှာစာဖတ်နေကြတယ် ).....Now နဲ့အတူတူပါပဲ။ Now က ကြိယာဝိသေသန ( Adverb ) ဖြစ်ပြီး..At the moment က အီဒီယမ်ဖြစ်ပါတယ်။
မေး....မင်္ဂလာပါ ဆရာ never ever လို့တွဲသုံးတာရဲ့ အဓိပ္ပာယ် သိချင်လို့ပါရှင့် ရိုသေစွာဖြင့်
​ဖြေ......never ( ဘယ်တော့မှ ) ဆိုတဲ့အရာကို ပိုလေးနက်အောင်သုံးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်.............ဥပမာI never use this cup.( ဒီခွက်ကို ဘယ်တော့မှအသုံးမပြုဘူး )I never ever use this cup. ( ဒီခွက်ကို ဘယ်သောအခါမှဘယ်တော့မှအသုံးမပြုဘူး) မေး.....အင်္ဂလိပ်စာအရေးအသားမတွေ့ရပဲ speakingမှာ အသုံးပြုများတဲ့ yesလို့ပြန်ဖြေတာနဲ့rightလို့ပြန်ဖြေတာနှစ်မျိုးကို ခွဲခြားရှင်းလင်းပေးပါဆရာရှင့်
​ဖြေ....Yes.......ဆိုတာက တစ်ဘက်သားစကားကို လက်ခံလိုက်တာRight - ဆိုတာက...မှန်တာပေါ့..........ကောင်းပြီလေ ဆိုတဲ့သဘောShe is very beautiful. ( သူမက သိပ်လှတာပဲနော် )Right. ( မှန်တယ် )You should go there. ( မင်းအဲဒီနေရာသွားသင့်တယ် )Right. ( ကောင်းပြီလေ )
​မေး.....Does he has ? လား Does he have ? လား
​ဖြေ.....ကြိယာကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ..စမ်းစစ်ဖို့လိုပါတယ်။ ရိုးရိုးကြိယာလိုသုံးတာလား ( ဥပမာ...go , eat , sleep , come )။ နောက် အကူကြိယာလိုသုံးတာလား( have gone , I don't know ) စတာတွေမှာ have , do တွေဟာ အကူကြိယာဖြစ်ပါတယ်..အကူကြိယာဆိုတော့..ကြိယာကိုအကူညီပေးတာပေါ့။ တစ်ချို့သောကြိယာများမှာ ရိုးရိုးကြိယာအသုံးရော၊ အကူကြိယာအသုံးရော နှစ်မျိုးရှိနေတာတွေရှိပါတယ် ( ဥပမာ.....Have , Do , စတာမျိုးတွေပေါ့ )...Have ကိုရိုးရိုးကြိယာလိုဆို( ရှိသည် လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ် )...I haveabook. ( ကျနော့်မှာ စာအုပ်ရှိတယ် )Sub က အနည်းဆိုရင် ( Has ) ကိုသုံးပါမယ်....she hasabook. အကူကြိယာလိုဆို Present/past perfect tense အပါဝင် tense တွေတစ်ချို့မှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။အဲဒီအခါမှာ ရိုးရိုးကြိယာအသုံး ( ရှိသည် ) ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ ဘာမှမဆိုင်တော့ပါဘူး။ ဒီတော့...Does he.....ဆိုတဲ့အသုံးမှာ....Does ဆိုတဲ့ အကူကြိယာ ပါလာတဲ့အတွက် Have ကို အကူကြိယာလိုသုံးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့သိထားသင့်ပါတယ်။အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ....Have ကိုရိုးရိုးကြိယာအနေနဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် အနည်းမှာHas ကိုပဲသုံးတယ်....( သို့သော် Do/Doesအကူကြိယာနောက်က လိုက်ရင် Sub သည်နည်းနည်း ......များများ ( s/es မပေါင်းသောပုံသဏ္ဍန်ကိုပဲသုံးရမယ် ) .....ဥပမာ......She goes to school every day. မှာ She က အနည်းဖြစ်တဲ့အတွက် နောက်က goကို es ထဲ့ရန်လိုသော်လဲ.......Does she go? မှာ Does ဆိုတဲ့ အကူကြိယာရှိနေတဲ့အတွက် နောက်က လိုက်ရမဲ့ Verb သည်....es/s ပေါင်းထဲ့ရန်မလိုတော့ပါ..............Have ( ရိုးရိုးကြိယာအသုံးမှာက ) es/s ပေါင်းထဲ့လို့မရပါ....Have က Has ပြောင်းပေးရပါတယ်။ Does he ပင်ဖြစ်လင့်ကစား.....နောက်က လိုက်ရမဲ့အရာကို has လို့သွားသုံးလို့မရပါ....Have သုံးရပါတယ်။အကြောင်းကတော့ ရှေ့မှာ အကူကြိယာ Does ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ​မေး.........Rock on ..ကိုဘယ်လိုမှာသုံးလည်းဆရာ
​ဖြေ....rock on ဆိုတာ ....တစ်ခုခုကို သဘောတူတဲ့အခါ...တအံ့တသြ ပြောလိုက်တဲ့ဟာပေါ့.......ဥပမာ.... Wow , Great ဒီလို အဓိပ္ပါယ်မျိုးQuestion: Hey, you want to go seeamovie?Response: Rock on! နောက်တစ်ခါ..............ပျော်ပျော်ရွင်ရွင်နှုတ်ဆက်တဲ့အခါ...ခွဲခွာတဲ့အခါမှာလည်း....သုံးပါတယ်။A - Whats, up, dude?B - Rock on.